Ndinedatha yeLiDAR - ngoku kuza kwenzeka ntoni? -Izixhobo zeGeofumadas
NgoJulayi, 2017 Okufumaneka, ezintsha
Kwinqaku umdla ezipapashwe kutshanje kaDavide Mckittrick, apho othetha iziphumo ulwazi olwaneleyo ubuchule ezinxulumene ukusebenza LIDAR GIS yaye ebhekisela Global Mapper njengesixhobo inkxaso nokulungiswa kwedatha ifunyenwe.
Emva kokufunda inqaku, ndikhuphele i-Global Mapper ukuba ndiyidlale okwethutyana, kwaye kufuneka ndivume ukuba igcina ukusebenza kweso sixhobo esasisazi kwaye sasisebenza ngaso ukwenza iimodeli zedijithali zomhlaba kwiifayile zombhalo ze-xyz. Namhlanje, xa ukufikelela kwidatha ye-LiDAR kuya kufikeleleka ngakumbi, akukubi ukujonga izinto ekufuneka ziqwalaselwe xa usebenza nayo kwaye ukhankanye into eyi-Global Mapper esebenza kakuhle. Oko ndinyanzelisa, indishiyile ndimangalisiwe yile nto bendiyivavanya; Ngobuso obuhlaziyiweyo, inkqubo igcina olo lula lokuvula idatha kunye nokuyibonisa kwiingcebiso esele zilungisiwe.
Ngenye imini, etafileni yeGeofumadas, ndabona emehlweni kaDon H -omnye wabacebisi bam-ukuqaqamba okuphazamisayo emehlweni abo kuthembiso olwenziwe ngumthengisi wedrone; Yayisisicelo sokuhlaziya idatha ye-cadastral; ngokuzisola okukhulu kuye kwafuneka ndiyikhuphele efini kwaye ndikhumbuze ukuba kumazwe amaninzi asaphuhlayo akukho miqathango iphantsi yokuzinza kwezi teknoloji; nangona ekugqibeleni sifikelele kwisivumelwano ngento enokwenzeka ngendlela esebenzayo. Ukuphazamiseka kobu buchule kwiminyaka embalwa edlulileyo kuvelise imvakalelo enkulu kumaziko athile aseburhulumenteni e-United States, ngoku idluliselwa kwamanye amazwe anemixholo yaseSpanishi, enokuthi ingene kumnqweno "wokukhwela amaza" okusetyenziswa kwetekhnoloji entsha , ukufaka idatha kodwa ungazi ukuba wenzeni ngayo.
Ukuba sithathela ingqalelo indleko efunwa kukusetyenziswa kweLiDAR kwiprojekthi, siyakubona ukuba kubalulekile, kuthathelwa ingqalelo ukuba kubandakanya ntoni ukuqokelela ulwazi ngobuninzi (ukuthetha 'ngokuQokelelwa kwamafu ePoint' ngokukodwa); nditsho nokuqonda ukuba ukusetyenziswa kwayo kusinika isiphumo esisebenzayo kunye nokonga ixesha elininzi. Xa isetyenziswe kakuhle, idatha ye-LiDAR isivumela ukuba silibone ilizwe ngendlela eyahluke mpela kuleyo siyenzileyo ngokwenziwa kwemveli ngokwesiko. Ngoku ungafumana umbono wokwenyani usebenzisa iifomathi ze3D kwaye unokuphinda unxibelelane nedatha apho kuphuhliswa khona iindlela ezintsha zohlalutyo.
UDavide uthi: "Idatha ye-LiDD ayiyona imveliso kodwa izinto eziluhlaza"Yintoni eyenza ingqiqo yokuqala yokona, ngombono wethu, ukuqonda isifundo. Ngokwenyani, ukufumana idatha yile galelo esiya kusivumela, emva kokusebenza ngokufanelekileyo, ukufumana iindlela ezahlukeneyo ezintathu.
Kodwa, ukuze sicace gca kufuneka sibuyele emva kwaye sikhumbule malunga nolwakhiwo olusisiseko kunye neempawu zedatha yeLiDAR. I-LiDAR (isichazi sokuKhanya kunye nokuBonwa koBungakanani) yifomathi yevektha yamachaphaza e-3D. Ifayile nganye okanye iseti yedatha yeLiDAR ngokubanzi iqulethe izigidi, okanye iibhiliyoni zamanqaku asondeleyo kunye nokusasazwa ngokungacwangciswanga. Ukusondela kwezithuba phakathi kwabo kuxhomekeke kwindlela efunyenwe ngayo idatha.
Idata ye-LiDAR ifumaneka kuluntu sele iqulunqwe, ngokubanzi kusetyenziswa iqonga eliseburhulumenteni ngokusebenzisa i-laser transmission kunye ne-technology reception, kwisicelo esihlangeneyo kunye nokusetyenziswa kweendlela ezichanekileyo kunye neendlela zokuhamba. Ixabiso x, y, z elithathwe kwimizuzu yexesha elibalwe phakathi kokusasazwa kunye nokufumana i-laser pulse ibonakaliswe kwinqanaba ngalinye.
A moya kancinci ukudala ilifu amanqaku bebekwe enye etshisayo, ngakumbi ngokukhawuleza kwi ezise zintabeni. Kuxhomekeka des woluvo esebenzisa-moya okanye moya, kwaye ukuba ukusebenza kunye data njani, oko kufakwa iimpawu ezongezelelweyo, ixabiso umbala, reflection ophezulu kunye nenani imbuyekezo ukubetha nganye, ngokuba ukubukela nokuhlalutya.
Yintoni enokuyenza ngeData yeData
Ukuba ecacileyo data LiDAR ivavanywa a inguqu iba ngokubanzi imodeli 3D, ngoko uthethe isizukulwana a Digital Umphakamo Model (DEM) okanye, sentlalo / utsalo oluzenzekelayo kumda wesangqa izinto 3D yezabelo iipatheni zejometri matrix amanqaku. Kwakhona kuyenzeka, ngokuguqula ukumelwa efini ngongoma, ukufumana ulwazi olunentsingiselo, emele iintlobo ezahlukeneyo komhlaba, ukuphakanyiswa yencopho kuthelekiswa emhlabeni, okanye ukwehluka lexinene amanqaku, phakathi kwezinye izinto.
Ukuhlela kunye nokucoca kwedatha ye-LiDAR
Kuqhelekile ukuba iifayile zeefayile zifunyenwe ziquka amanqaku amaninzi kunokuba ziyimfuneko. Ngoko ke, ngaphambi kokusebenzisa inkqubo yokucoca kwinqanaba lefu, kulungele ukuhlolisisa imethadatha yobume. Isishwankathelo esifumanekayo siya kunika ulwazi oluyimfuneko malunga neempawu zelifu eziza kubonisa ukuba kwenziwe izigqibo ezaneleyo zokucoca inkqubo.
Ukuphucula umgangatho weenkcukacha ze-LiDAR
Emva kokuphelisa iingongoma ezingadingeki, isinyathelo esilandelayo kukufumana nokuhlaziya kwakhona loo maphulo omhlaba awazange ahlukaniswe ekuqaleni. Oko kukuthi, kufuneka silungise idatha. Oku kubaluleke kakhulu ukuba bakwazi ukuvelisa iDEM yesigqibo esilungileyo.
Apha sibheka ukuba ngaba sikwazi ukwenza inkqubo yokucoca idatha efanelekileyo kunye nokuhlaziywa kwazo emva koko. Zombini iinkqubo, ngokucacileyo ziyimishini, zibaluleke kakhulu kwiziphumo ezifunyenweyo.
Kule Global Mapper iyasebenza kakuhle. Ubuncinci, kwinqanaba lokuhlela nokucoca. Kwaye kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba ngokususa amanqaku abangela ingxolo, kukho idatha ehlelwe njengomphezulu ongabalulekanga. Ngokusebenzisa iMephu yeHlabathi, akunakwenzeka kuphela ukuphelisa ngokwaneleyo amanqaku angaphandle kwendawo yeprojekthi, kodwa kunye nezo zingafunekiyo ziimpawu zazo, kuba isicelo sinezinto ezininzi zokucoca.
Ngoku makhe sithethe ngokucokiswa kwedatha. I-Global Mapper iquka iinkqubo ezininzi ezidibeneyo apho idatha ichongiwe ngokuzenzekelayo kwaye iingongoma zomhlaba ezingakhange ziqwalaselwe ekuqaleni ziyahlengahlengiswa ukuphepha ukulahlekelwa ngedatha ebalulekileyo. Ngaloo ndlela ipesenteji ezinxulumene neengongoma ezingasetyenziswa ekudalweni kwe-DEM kunye nesisombululo esiphezulu sinyuka.
Umzekelo endisebenza ngawo nedata ngaphambi nangemva kweqhwithi; ngokuqinisekileyo ngaphandle kokuba ne-wizzard, isofthiwe inezixhobo eziphantse ziphakanyiswe ekuphumeni komsebenzi wokufumana, imodeli, ukucoca, ukuvelisa imodeli entsha.
Ngokusebenzisa ezinye iinkqubo zokuhlaziywa ngokuzenzekelayo, izakhiwo zesebenzi, imithi kunye neetambo zingabonwa kwaye ziphinde zenziwe kwakhona, nto leyo isinyathelo sokuqala kwinkqubo yokukhangela iimpawu.
Ukudalwa kweModeli yokuPhumela kweDijithi
Ukwenza inkqubo yohlalutyo lwe-3D, phantse kuwo onke amaxesha, ifu yeLiDAR ifu kufuneka idityaniswe idatha. Sisebenzisa inqubo ebizwa ngokuthi 'lattice' apho ixabiso elihambelana nendawo nganye ye-matrix (ngokuqhelekileyo ixabiso lokuphakama) lisetyenziswe njengesiseko sokwenza imodeli eqinile ye-3D. Lo mzekelo ungabonisa indawo kuphela (imodeli yendawo yedijithali) okanye umphezulu ongaphezulu komhlaba, njenge-canopy yehlathi (i-digital surface model). Ukwahlula phakathi kwezi zibini kuvela kuluhlu nokukhethwa kwamaphuzu asetshenziselwa ukuvelisa umhlaba.
Ukuba sicinga ukuba uninzi lwabasebenzisi be-LiDAR lubheka isizukulwana se-DTM (i-Digital Terrain Model) njengenjongo yabo ephambili, i-Global Mapper inikezela ngokuqokelelwa okwaneleyo kwezixhobo zokuhlalutya umhlaba, kubandakanya ukubalwa kwemitha; ukusika nokuzalisa ukulungiswa; isizukulwana semigca yokujikeleza; ukucaciswa kwamanzi amaninzi; kunye nomgca wokuhlalutya kwamehlo.
Ukukwazi ukuvelisa ukubakho kwedatha enkulu ukusuka kwindawo eshinyeneyo kwilifu kuchaza indlela entsha eya kwindlela entsha yokuqhubekeka kwedatha yeLiDAR. Uhlalutyo lweepateni kubume bejiyometri yamanqaku akufutshane kungakhokelela kukucaciswa kweemodeli ezakhiweyo, ezimelwe njengeepoligoni ezinamacala amathathu; iintambo zombane okanye iintambo phezu komhlaba, ezimelwe njengeelayini ezime-ntathu; kunye neendawo zomthi, ezivela kubume ngokudibeneyo bamanqaku ahlelwe njengezityalo eziphakamileyo. Amathuluzi okukhupha i-vector Global Mapper afaka kwakhona inketho yokucinywa kwenkcubeko apho imigca ye-3D kunye neepoloni ziyakwenziwa ngokulandela uluhlu lweembono zeeprofayili eziphambili kwiindlela ezichazwe ngaphambili. Esi sixhobo singasetyenziselwa ukudala imodeli enemilinganiselo emithathu yesakhiwo salo naluphina isakhiwo esiphezulu, njengomgca wendlela eya ngasendleleni.
Ukuqukumbela kukaDavide kucacile. Ukuba nedatha ayisiyiyo yonke into xa usebenza neLiDAR; Ukuba nesixhobo sokuqhubekekisa ngendlela ebonakalayo kukuphucula ukusetyenziswa kwale teknoloji.
Kuhlekisa ukuba ngexesha lokugqibela ndabona le sicelo i-2011, nge 11 version. Ndandisele ndenza umsebenzi ne-LiDAR kodwa yayixinezeleka ekusetyenzisweni kwezixhobo, ndiyekile ukuyibona kwi 13 version apho ukukwazi ukuphucula khona. Ngumcimbi wokukhuphela kunye nokuyivavanya, njengoko le nguqulo ye-18 ibonakala ngathi yenye yezona software zibiza ixabiso eliphantsi ezenza phantse yonke into enokufuneka isebenzise idatha yeLiDAR.
uye ku IMapper Global
umbono yam yokuqala egeomates My
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-QGIS, i-PostGIS, i-LADM-kwiKhosi yoLawulo loMhlaba ephuhliswe yi-IGAC
Post Next Simple GIS Software: GIS yiseva $ 25 client ze Web for $ 100Okulandelayo »
Impendulo enye ku "Ndinedatha ye-LiDAR-ngoku kuza kwenzeka ntoni?"
Mntul IGIS Infomedia